TRUESTORY: "ကုလား"လို့ ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ဒေါ်စုကြည်
ရှေးဦးစွာ အသိပေးလိုပါ၏။ ဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏ "သူငယ်ချင်းလို့ ပဲ ဆက်၍ခေါ်
မည် "ခိုင်" ၀တ္ထု၏ အမည်ကို သဘောကျပါ၏။ အတုလည်း ယူပါ၏။ ထို့ ကြောင့် ဤ စာစုကိုလည်း "ကုလားလို့ ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ဒေါ်စုကြည်" ဟု အမည်သညာ ပေးလိုက်ပါ၏။
ကုလား ဟူသော အသုံးအနှုန်း၏ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပါတော့မည်
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာသည် ပင်ကိုယ်ကတည်းက လွတ်လပ်စွာ ရေးသား၊ ပြောဆိုခွင့် ကို ပေးထား၏။ထို့ ကြောင့် ပင် မြန်မာများသည် မည်သည့် အမည်နာမ၊ အကြောင်းအရာများကို မဆို တရား ဟောရာမှာလည်း လွတ်လပ်စွာ ဟော ကြား အသုံးပြု၏။ စကားပြောရာမှာလည်း လက်စွဲပြု၏။ စာပေ ရေးသားရာတွင်လည်း လက်လွတ်မခံ၊ ထိထိမိမိ ခေါ်ဝေါ် ပြောဆို သုံးစွဲကြ၏။ ဤသို့ခေါ်ဝေါ်၊ သုံးစွဲ၊ ပြောဆိုခြင်းကို ဆရာတော်များ၊ စာရေးဆရာများ၊ သာမာန် အရပ်သူ အရပ် သားများမှအစ သုံးစွဲ ပြောဆိုကြ၏။ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို တတ်သိ၊ နားလည်သူတိုင်း မည်သည့် အဖုအထစ်မျှ မရှိပဲ သုံးစွဲ ကြ၏။ ဤသို့ပကတိ သဘာဝအရ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာခဲ့သည်မှာ လွတ်လပ်သည့် မြန်မာတို့ ၏ သမိုင်းအစဉ်အလာ တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါ၏။ ငြင်းဆန်၊ ကန့်ကွက်၍ မရနိုင်ပါ။ ရလိမ့်မည်လည်း မဟုတ်ပါ။
မြန်မာတို့ ၏ နေ့ စဉ် ဘ၀ထဲက "ကုလား" ဟူသော အသုံးအနှုန်း
မြန်မာတို့ ၏ နေ့ စဉ်ဘ၀တွင်လည်း "ကုလား"ဟူသော စကားလုံးကို အမည်နာမ အမျိုး မျိုးဖြင့် ခေါ် ဝေါ် ပြောဆို သုံးစွဲကြ ၏။ ဥပမာအားဖြင့် "ကုလားမယား" "ကုလားမ" "ကုလားထိုင်" "ကုလား ဒံပေါက်" "ကုလားထမင်း" "ကုလားဟင်း" "ကုလားမုန့် "၊ "ကုလားကွမ်းယာ" ၊ " ကုလား ကား ပေရှည်"၊ "ကုလားရွှေ" ၊ "ကုလား စကား" " ကုလား စပါး"၊ "ကုလား နွား"၊ "ကုလားတက်" "ကုလားအုတ်" စသည်ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြပါ၏။ ကုလား မဟုတ်သော်လည်း အသား မဲသူကို ကုလားဟု အချင်းချင်း ခေါ်ကြ၊ ပြောကြ နှုတ်ဆက်ကြ၏။ သိရသလောက် မည်သည့် ပြ​ဿနာမျှ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ။
မြန်မာစာပေထဲက "ကုလား" ဟူသော အသုံးအနှုန်း
ဥပမာအားဖြင့် "ကုလား" ဟူသော အမည်နာမ အသုံး အနှုန်းကို မြန်မာစာပေ သမိုင်းတွင် အထင် ကရ ဖြစ်သော ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းက "ကုလား အရေးကိုဖြင့် ဓား မသွေး လောက်ပါ" စသည်ဖြင့် ရေးသား သုံးနှုန်းခဲ့၏။ "ဦးကုလား ရာဇ၀င်" ဟူသော သမိုင်းဝင် စကားတွင်လည်း "ကုလား" ဟူသော စကားလုံးကို သုံးစွဲထားပါ၏။ သို့ သော် ထိုရာဇ၀င် ဆရာသည် "ကုလား" မဟုတ်ကြောင်း သိရ၏။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု၏ ပင်ကိုယ် လွတ်လပ်မှုသဘာဝအရ "ကုလား" ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲ ခြင်းပင် ဖြစ်တန်ရာ၏။
မြန်မာအဘိဓာန် အတွဲ(၁) ကကြီးမှ စ လုံး၊ စာမျက်နှာ(၁၂) တွင်လည်း "ကုလား" ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ဤသို့ တွေ့ရပါ၏။
၂။သာမန်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ဒေသမှ လာသူများ၊
-န၀ိ/ကလား/ နိုင်ငံခြားတွင်ဖြစ်သော၊ နိုင်ငံခြားမှလာသောဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ ပညာရှင်များ ရေးသား ပြုစု ထားသည့် ဤမြန်မာအဘိဓာန်၏ ဖွင့်ဆိုချက်အရ "ကုလား" မျိုးပေါင်း ခြောက်ဆယ် ရှိကြောင်းသိရ၏။ ထို "ကုလား" မျိုး ခြောက်ဆယ် စာရင်းတွင် ခုနစ် (၇) ယောက် မြောက်သည် "ဘင်္ဂါလီ"၊ ရှစ်(၈) ယောက်မြောက်သည် "ကုလားဖြူ"၊ သုံးဆယ့်သုံး (၃၃)ယောက် မြောက်သည် "အင်္ဂလိပ်" ဖြစ်ပြီး၊ လေးဆယ့်တစ်(၄၁)ယောက်မြောက်သည်"အာရပ်"ကုလား" ဖြစ်၏။ ဆရာ သိန်းဖေမြင့်၏ "ကုလား ဗမာ အဓိကရုဏ်း" စာအုပ်နှင့် "အရှေ့ က နေ၀န်းထွက်သည့် ပမာ" (နှစ်အုပ်တွဲ) တွင်လည်း "ကုလား" ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို တွေ့ ရပါ၏။ ဆရာ ဦးအောင်သိန်းဟန် (၀ိဇ္ဇာ ဂုဏ်ထူး) ၏ "မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းသစ်" စာအုပ်ထဲမှာလည်း "ကုလား" ဟူသော စကားကို သုံးနှုန်းထားပါ၏။
ရခိုင်အရေးနှင့် ဘင်္ဂါလီ ကုလား
ရခိုင်အရေးအခင်း စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တွင် ပါဝင်သော ဒေါက်တာ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ်၏ ပြောပြ ချက်အရ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း ကျော်အထိ ရှိနေသော "လူနည်းစု" ဆိုသူ ဘင်္ဂါလီ "ကုလား"များသည် လက်ရှိတွင် မြန်မာပြည်၏ အနောက်တံခါး ရခိုင် ပြည်နယ်ကို ချိုးဖောက်ဝင်ရောက် နှောက်ယှက် လျက်ရှိ၏။ သို့ သော်...ဒေါ်စုကြည်က "လူနည်းစု" ဆိုသူဘင်္ဂါလီ "ကုလား" များကို လူများစု အမည် ခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ က ညှာတာရမည်ဟု ဆိုပြန်၏။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ လွတ်လပ်စွာ ပြော ဆိုခွင့်အရ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ၊ ညှာညှာ တာတာ ဖြေဆိုရပါမူ "ကုလားဖြူနှင့် "အင်္ဂလိပ် ကုလား" သည် ဒေါ်စုကြည်၏ အသဲစွဲဖြစ်၏။ ဒေါ်စုကြည်သည် "ကုလား ဖြူ" "အင်္ဂလိပ် ကုလား" နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့၏။ သားနှစ်ဦးပင် မွေးဖွားခဲ့၏။ မကြာသေးမီ ရက်များအတွင်းက ရခိုင်ဒေသန္တရ အမိန့် အရ ဗူးသီးတောင်၊ မောင်းတော ဒေသများတွင် ကလေး (၂) ယောက်သာ ယူရမည်ဟု ကြားသိလိုက် ရ၏။ ဒေါ်စုကြည်က ထို ဒေသန္ထရအမိန့် ကို တစ်ခါလာ မဲပြာပုဆိုးဟူသော လူ့အခွင့်အရေး စကားလုံးနှင့် ကိုင်ပေါက်၏။ ဒေါ်စုကြည်သည် လူ့အခွင့်အရေးတည်း ဟူသော မျက်မှန်စိမ်းတပ်ပြီး ကြည့်နေ သမျှ ဘင်္ဂါလီ ကုလားဟူသော ကောက်ရိုးခြောက် ကို မြက်စိမ်း ပင်ထင်ပြီး ဆက်၍ စားနေလိမ့်ဦးမည်ဟု ခန့်မှန်းရ၏။ သတင်းထောက် ပီတာ ပေါ့ (ပ်)ဟန် (ဒေါ်စု ကြည်၏ ဘ၀သမိုင်းကြောင်းကို စာအုပ်ရေးသား ထုတ်ဝေသူ)၏ ပြောဆိုချက် အရ ဒေါ်စုကြည် သည် ပါကစ်စတန် "ကုလား" နှင့်လည်း ထိခဲ့၊ ညိခဲ့ ၊ ရိခဲ့ဘူး ကြောင်းသိရ၏။ ပို၍ ဆိုးသည် မှာ ပေါ့ပ်ဟန် ၏ စကားအရ ဒေါ်စုကြည်သည် မျက်ရည် စက်လက်နှင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်ဟု သိရ၏။ အဆီကို စား၊ အသားကို မျိုသွား၍ တငိုငို ကျန်ရစ်ခဲ့ ရသူဟုလည်း ဆိုသင့်ပါ၏။ ဤ စကားဆက်တွင် ကဗျာစာပေသဘောအလို ပြောရလျှင် ချန်ခဲ့သူက "ကုလား"၊ ကျန်ခဲ့သူ က"ဒေါ်စုကြည်" ပင်ဖြစ် ၏။ ဘယ်သူ၊ ဘယ်ဝါ၊ ဘယ်ကလာ၍ ငြင်းနိုင်ပါမည်နည်း။
သို့ သော် ... ဒေါ်စုကြည်က စိတ်မနာ။ ကုလားကိုသာ အထာပေးနေဆဲ ဖြစ်၏။ ထို့ ကြောင့်လည်း ကုလားကို ထိတယ်လို့ထင်တိုင်း၊ကုလားကို ရိတယ်လို့မြင်တိုင်း ဆပ်စလူးခါအောင် နာကျင်ပေး တတ်၏။ လူနည်းစု လို့အမည်တပ်ပေး၏။ "လူနည်းစုကို ညှာတာပါ" ဟုလည်း ဆိုတတ်ပြန်၏။ တကယ်တော့ ဒေါ်စုကြည်သည် ဒေါင်း ယောင်ဆောင်သော ကျီးလို ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာကို ချစ်ဟန်ဆောင် ကာ မုန်းနေသူသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဆိုတန်ကောင်းပါ၏။ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ကတော့ ဒေါ်စုကြည်၏ ဦးဆောင်ပါတီကို ခွပ်ဒေါင်းပါတီ မဟုတ်၊ မွတ်ဒေါင်းပါတီ ဟု ပို၍ တိကျ၊ မှန်ကန်စွာ မိန့် ဆိုထားပါ၏။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် "ကုလား" ဟူသော အသုံးအနှုန်း
၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့၊ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ကလည်း၊ ဖဆပလ အဖွဲ့ ချုပ်ကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်စဉ်က သူ၏ မိန်ခွန်းတွင် ဤသို့သုံးနှုန်းပြောဆိုခဲ့ပါ၏။
"ကုလား၊ တရုတ် စတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို သတိပေးလိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတွင်းရေး မှာ သူတစ်ထူးက စစ်တု ရင် အရုပ်လုပ်ပြီး ကစားခြင်းကို မခံရအောင် သတိထားဖို့ ဖြစ်တယ်…. ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အချို့သော သူတို့ဟာ ယခုအခါ၌ ကုလား၊ တရုတ်စတဲ့ နိုင်ငံခြားသား များနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကတုန်းကတိုက် လုပ်ပါ လိမ့်မယ်…… ရှင်းရှင်းပြောရ မယ်ဆိုရင် ကုလား၊ တရုတ် စတဲ့နိုင်ငံခြားသားတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်း သားများရဲ့ မိတ်ဆွေများအဖြစ်နဲ့ နေထိုင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရန်သူများအဖြစ်နဲ့ နေထိုင်ကြမလားဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ရန် လိုပါတယ်….."
ဗိုလ်ချုပ်၏ အထက်ပါ မိန့် ခွန်းစာပိုဒ် ခတ်တိုတိုလေးထဲမှာပင် "ကုလား" ဟူသော ဝေါဟာရကို သုံးကြိမ် ထပ်၍ ခေါ်ဝေါ်၊ သုံးနှုန်း ပြောဆိုခဲ့ပါ၏။
ဒေါ်စုကြည်၏ အမြင်နှင့် "ကုလား" ဟူသော အသုံးအနှုန်း
ကုလား ဟု ခေါ်ဝေါ်၊ သုံးနှုန်း ပြောဆိုခြင်းအပေါ်၊ ဒေါ်စုကြည်က ခါးခါးသီးသီး တုန့် ပြန် ဖြေကြားခဲ့ ဖူး၏။ အချိန်၊ အကြောင်း အရာနှင့် နေရာကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အယ်လ်အေမြို့ နေ၊ မြန်မာများနှင့် တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ပွဲဖြစ်၏။ ထိုပွဲတွင်တီကောင် ကို ဆားနှင့် အတို့ ခံရသည့် အလား ဒေါ်စုကြည် (သို့ ) "ကုလားမယား"က မဟားဒယား ကက်ကက် လန်အောင် ရန်ထောင်ခဲ့ပါ၏။ မာန်စောင်ခဲ့ပါ၏။ ကိုးကားတော့မည့် အောက် ပါ စာပိုဒ်များကို စာဖတ်သူများ ဆက်၍သာ ရှုစေချင်ပါ၏။ အနီရောင် စာပိုဒ်များ အားလုံးသည် ဒေါ်စုကြည်၏ စကားလုံး များသာဖြစ်ပါ၏။ သူမကိုယ်တိုင် ပြောထားသည့် စကားလုံးများကို အသံဖိုင် တစ်ခုမှ ကူးပြီး ထပ်မံ ဖော်ပြလိုက်ပါ၏။ ဝေဖန် သုံးသပ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါ၏။ ဒေါ်စုကြည်က "ကုလား" အသုံးအနှုန်းအပေါ် တုန့် ပြန်ဖြေဆိုရာတွင်...
"ဒါ မိဘတွေက မသင်တာပဲ။ ဒါက ပညာရေးမှာ ကျောင်းကကို သင်သွားရမှာ။ ဥပမာဆိုရင် ကုလားပေါ့နော်။ ကျမတို့ မိတ် ဆွေတွေက ဒီလို ကုလား လို့ခေါ်တာ မကြိုက်ဘူးဆိုတာ ကျမသိတယ်။ ကျမ ဘယ်တော့မှ မခေါ်ဘူး။ ကျမက အိန္ဒိယ မျိုးနွယ်လို့ခေါ်ရင် ခေါ်တယ်။ မွတ်ဆလင်မ် လို့ ခေါ်ရင် ခေါ်တယ်။ ဘာသာရေးအရ ဟိန္ဒူလို့ခေါ်ရင် ခေါ်တယ်။ ဒီ ဘာဖြစ် လို့ သူတစ်ပါးမကြိုက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးကြရတာလဲ။"
"ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးရင်၊ ကိုယ်ဘယ်လို ထိခိုက်မလဲ၊ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ် ရှိသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကျမ ကတော့ အားလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ် ရှိစေချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ တစ်ပါးသူကို စော်ကားပြီး ပြောတာဟာ ကိုယ့် သိက္ခာ ကျတယ်ဆိုတာလဲ နည်းနည်းလေးတော့ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ဒါ သိက္ခာမဲ့တဲ့ သူတွေသာ သူများကို စော်ကား ပြီးတော့ပြောတာ။ အဲဒီလို မသင်တာဟာ မိဘတွေကလဲ မသင်တာပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလဲ မသင်တာပါတယ်။"
ဒေါ်စုကြည်၏ အဆင်ခြင် ကင်းမဲ့ သော အထက်ပါ စကားရပ်များကို အပေါ်ယံ အမြင် ကျဉ်းကျဉ်း ကလေးဖြင့် ကြည့်လျှင် ဟုတ်သယောင် ထင်ရပါ၏။ သို့ သော်...သို့ သော်...ကုလားဟု သုံးနှုန်းခဲ့ကြ၊ သုံး နှုန်းနေကြသော မြန်မာ သမိုင်းဆရာ များ၊ စာပေ ကျေးဇူးရှင်ကြီးများ၊ ဗိုလ်ချုပ်အပါအ ၀င် မြန် မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ ဆရာတော်၊ သံဃာတော် များ၊ အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင် ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ဒေါ်စုကြည် ထင်သလို၊ မိ-မဆုံးမ၊ ဖ-မဆုံးမ သား-သမီးများ မဟုတ်ကြ ပါ။ မိကောင်း-ဖခင်၊ သား-သားသမီးများ ဖြစ်ကြပါ ၏။ ဒေါ်စုကြည် မြင် သလို ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ် ကင်းမဲ့သူများ မဟုတ်ကြပါ။ လူသားဆန်စွာ အမျိုး-ဘာသာ-သာသနာ ကို အကြင်နာ မေတ္တာ ပြည့်ဝစွာဖြင် စောင့်ရှောက် သူများ ဖြစ်ကြပါ၏။ ဒေါ်စုကြည် ယူဆသလို သိက္ခာမဲ့ သူများလည်း မဟုတ်ကြပါ။ အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်ကို စောင့်-ထိန်း ရင်း သိက္ခာ သမာဓိ ပြည့်ဝစွာဖြင့် မြန်မာကို ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ ထည်ဝါစွာ မြှင့်တင်ခဲ့ကြပါ၏။ မြှင့်တင်နေပါ၏။ လက်ရှိ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစိုးရသည် ခိုင်မာသော သက်သေတစ် ခုပင် ဖြစ်ပါ၏။ ဒေါ်စုကြည် သုံးသပ် သလို ၊ လူမျိုး တစ်စုက အခြားလူမျိုး တစ်စုကို စော်ကားခြင်း လည်း မဟုတ်ပါ။မိမိတို့ ၏ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်း ကြောင်း အရှိကို အပြည့်အ၀ လက်ခံ ကျင့်သုံးခြင်းသာဖြစ်ပါ၏။ လွတ်လပ်သော မြန်မာများပင် မဟုတ်ပါလား။ဒေါ်စုကြည် ဆုံးဖြတ်သလို ၊ မြန်မာများသည် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် ကင်းမဲ့သူများ မဟုတ်ကြပါ။ မြန်မာများသည် ဆင်ခြင်တုံ တရား လက်ကိုင်ထားပြီး အရှိတရားကို သတိထား၍၊ အသိများနှင့် မြန်မာတို့ ၏ ဘ၀ခရီး ကို မြန်မာ့ မူဟန်အတိုင်း လျှောက်လှမ်း နေသူများသာ ဖြစ်ပါ၏။ ထိုခရီးတွင် ဒေါ်စုကြည်တစ်ယောက်တော့ ပါလာလိမ့်မည် မထင်ပါ။ မြန်မာများသည် သူတစ်ပါး မကြိုက်တဲ့အသုံးအနှုန်းကို သုံးခြင်းမ ဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ ၏ စာပေ စကားလာ သမိုင်းကို လက်ခံခြင်းသာဖြစ်ပါ၏။ သို့ ပါ သော် လည်း... ဒေါ်စုကြည်က မြန်မာ့သမိုင်းကို ဥပေက္ခာပြု၍ "မြန်မာကို ဘာမား" ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကသာ သိက္ခာကျသည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါ၏။ မြန်မာပညာရှင်များကလည်း မကြိုက်၊ သမိုင်းနှင့်လည်း မကိုက် ညီသည့် "ဘာမား" အသုံးအနှုန်းကို ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပါ၏။ဒေါ်စုကြည်သည် မြန်မာကို "ဘားမား" ဟု မခေါ်သည့် အချိန်ကစပြီ်း၊ ဒေါ်စုကြည်ကိုလည်း "ကုလား မယား" ဟု ခေါ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း ကြိုတင်၍ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်စကား လက်ဆောင်ပါးလိုပါ၏။ သို့ သော်... ကုလား မယားဟု မခေါ်သော်ငြားလည်း "ကုလား"လို့ ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ဒေါ်စုကြည်" လို့ သာ သန္နိ ဋ္ဌာန် ချလိုက်ရပါတော့သည်။
U Khin Maung Saw(Berlin)၏ (Mis)Interpretations of Burmese Words: Part I. In the case of the term Kala
Posted by TRUE STORY at 2:31 PM
ကလားကိုကလားလို့ခေါ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လိုချင်ပါသည် ဒီ ကိုကြီး ဖေ့ဘုတ်အကောက်ထဲပို့ပေးလို့ရမလားခင်ဗျား
ဒီနေ့ ကျွန်မ သင်ခန်းစာ တစ်ခု ရခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့...